Atụmatụ 5 iji melite nchekwa na ịzụta eCommerce | ECommerce ozi ọma
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime isi ihe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị ga-etinyerịrị bụ nchekwa na azụmaahịa ya. Enweghị ihe a, enwere ike ịme ihe ole na ole site na ọrụ ọrụ a. Kama nke ahụ, ọ bụ envelopu nke ị nwere ike kwalite azụmahịa ahụ ma ọ bụ ọbụna jiri ihe dị iche iche tụnyere ụlọ ọrụ asọmpi.
N'okwu a, ị gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị itinye oge na ego iji meziwanye nchekwa nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Ka i wee nwee ike imezu atụmatụ a site ugbu a gaa n'ihu, anyị ga-enye gị usoro nke ndụmọdụ bara ezigbo uru nke ebumnuche ya ga-abụ iji melite nchekwa nke eCommerce gị.
N'otu aka, ọ gụnyere melite akụrụngwa na i nweela, ma na nke ọzọ iji webata sistemụ ọhụrụ ndị ọzọ na-enye ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị obi ike ka ukwuu. Site na nke a, a na-atụ aro ka ị họrọ, karịa ihe niile, ịkọwapụta ihe ndị ị ga-ebute ụzọ mgbe ị na-akọwa azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dijitalụ. N'ihi na ọ ga - abụ ihe ga - akwado usoro nchekwa ndị a anyị ga - ekpughere gị.
1 Nchekwa ahịa: asambodo nkwa
2 Paymentzọ nkwụnye ụgwọ zuru oke
3 Na-enweghị ịchekwa data dị nro
4 Họrọ iji 3 D Secure
5 Na-agbaso ụkpụrụ nchekwa kachasị elu
Nchekwa ahịa: asambodo nkwa
Inye asambodo SSL ga-abụ ihe karịrị ị ga-eji mee ihe ngwa ngwa site ugbu a gaa n'ihu. Ikwesighi ichefu na otu n’ime ụzọ kachasị dị mma iji kwenye nchebe nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị bụ iji Asambodo SSL. Akwụkwọ a na-enye gị ohere ịnyagharịa na protocol https, nke bụ nha nke nchebe ka ukwuu na nke ahụ, karịa ihe niile, ga-enyekwu gị obi ike n'ihu ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ.
Ihe omuma ozo ikwesiri ibubata na ahia gi bu inye ndi oru nlezianya ugwo. N'echiche a, ha ga-enwerịrị obi ike dị ukwuu na atụmanya nke ndị a. Ya mere, na ha nwere mmesi obi ike zuru oke na ha ga-enwe ike ịhazị ihe ịzụrụ ha yana nkwa zuru oke na ha ga-aga nke ọma na azụmaahịa ego ha.
Paymentzọ nkwụnye ụgwọ zuru oke
O doro anya na ọ bụ ihe ọzọ dị na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị ga-enye n'oge a. N'okwu a, na-echefughị ​​na ụdị ịkwụ ụgwọ kachasị dị kaadị ma ọ bụ kaadị debit. Iji mejuputa ịkwụ ụgwọ kaadị ị nwere ike iji ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, mana karịa ihe niile ị ga-ahụrịrị na ọ bụ nhọrọ kachasị nchebe nke ihe niile. Site na ebumnuche bụ isi nke ijide n'aka na a gaghị enwe wayo ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-enye ụgwọ na ụzọ ndị a na ịkwụ ụgwọ dijitalụ.
N’aka nke ọzọ, ị nwekwara ike inye onyinye a na-akpọ ịkwụ ụgwọ elektrọnik. Mana na nke a, n'okpuru oke nchekwa na arụmọrụ. Karịsịa na-echebara enyo na akụkụ dị mma nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nwere iji ngwa ọrụ a na ịkwụ ụgwọ dijitalụ. Ya mere, nkwa ndị ahụ ga-adị ukwuu ma nwekwaa ụzọ dị ukwuu na mkpịsị aka gị. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, ha dị maka mmejuputa ha na azụmaahịa kọmputa, n'agbanyeghị ụdị na mbido ha.
Onweghi obere ihe dị mkpa bụ ịnabata sistemụ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ a maara dị ka nke ọzọ yana nke ahụ nwere ike ịbụ azịza maka mkpa gị gbasara ihe a ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị nwere. Site na nke a, o yiri ka ọ dị oke mkpa ịkọwa eziokwu na ọ dị ezigbo mkpa na-atụ aro ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ maka onye ahịa ọ bụla. Ya mere, n'ụzọ dị otú a, ha nọ n'ọnọdụ ịchọpụta ụdị ịkwụ ụgwọ ha masịrị ma nwee ike ịga n'ihu na-azụ ihe n'ịntanetị na-enweghị ụdị mmachi gbasara usoro ịkwụ ụgwọ ha nwere ike iji rụọ ọrụ azụmaahịa ha.
Na-enweghị ịchekwa data dị nro
Ọ bụ ọrụ ọzọ dị na ụlọ ahịa na azụmaahịa dị n'ịntanetị nke mere na n'ụzọ dị otu a enwere ntụkwasị obi karịa ụdị ọrụ ego a. Site na nhichapụ nke data nwere mmetụta ọsọ ọsọ dị ka nọmba kaadị akwụmụgwọ, ụbọchị njedebe ma ọ bụ koodu CVV.
Nwere ike ịchekwa data dị mkpa maka nloghachi na nkwụghachi. Ọ bụ omume ọjọọ ịchekwa data niile dị nro maka na o na enye ndi hackers ohere izuru ihe omuma ma jiri ya mee uru. Ọ dị oke mkpa ịgbaso iwu ndị a n'ihi na eziokwu ị nwere ike ịga n'ihu na-enwe ntụkwasị obi nke ndị ahịa gị na ndị ọrụ dabere na ha. Maka na enweghị ha, obi abụọ adịghị ya na ị ga-enwe obere ndekọ dị mma na azụmahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Họrọ iji 3 D Secure
O doro anya na ị nwere ike ịjụ ihe usoro a pụrụ iche na nchekwa azụmahịa bụ na gịnị mejupụtara ya. Ọfọn, ọ bụ nnabata usoro iwu na-enye gị ohere itinye usoro nkwenye mgbe ị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Ebe ị ga - ahụ na ọ bụkwa sistemụ ga - enyere gị aka site ugbu a gawa izere ịkwụ ụgwọ aghụghọ na kaadị akwụmụgwọ na-enweghị ọnụnọ kaadị ahụ.
Ọ dị mfe iji n'ihi na ọ na-adịkarị etinyere na ndị kasị nkịtị kaadị na debit kaadị na ụdị a nke ego arụmọrụ. Tụkwasị na nke a, ọ na-achọ iwebata PIN ka mmegharị ahụ wee nwee nchebe zuru oke na usoro ahụ yana enweghị ịgbakwunye mmetụta ọ bụla na ụdị mmegharị ntanetị iji kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Na-agbaso ụkpụrụ nchekwa kachasị elu
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ichefu iji aka ike sie ike na usoro nchekwa kachasị na usoro ndị a ma tinye ya na Standard Security Standard. Maka nchekwa dị ukwuu n’ụzọ ịkwụ ụgwọ kachasị dị mkpa, ọkachasị ndị metụtara kredit ma ọ bụ kaadị debit yana ụlọ ahịa niile dị na ntanetị ga-ekwenyerịrị n’oge a. Ga-enye ndị ahịa ọbụlagodi ntụkwasị obi ka ukwuu ka ha wee nwee ike mezuo nzụta ha na nkwa zuru oke na enweghị ego ọ bụla. Bụ usoro a na-achịkwa site na mpụga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Atụmatụ 5 iji melite nchebe na ịzụta eCommerce